Bageqa amagula abasinde bebulawa - Ilanga News
Home Izindaba Bageqa amagula abasinde bebulawa
Bageqa amagula abasinde bebulawa
Izisulu zithi zabhunyelwa nangodizili sezizothungelwa ngomlilo ePhoenix
BAGEQA amagula abesilisa abane nowesifa-zane oyedwa base-Nanda, abaphunyuke emlonyeni wengwe-nya ngoMsombuluko odlule ngesikhathi umphakathi wasePhoenix, eThekwini, ubahla-sela, ubasola ngokuba yizigebe-ngu, maqede wathungela ngomlilo itekisi abebehamba ngalo.
Bathi behlelwe yile nkanankana ngemuva kokusuka kwezibhelu zabantu ababezitapela ezitolo, ezaqutshulwa ngabalandeli bakaMnu Jacob Zuma. Bathi baya ePhoenix nje, babeyothenga izidakamizwa endaweni yabo abajwayele ukuzithenga kuyona.
Kulesi sigameko kwashona uMnu Njabulo Dlamini – okwakuhanjwa ngetekisi yakubo – owasha-ywa waze washona. Abasindile nguMnu Sanele Marese (28) – ongu-mshayeli wetekisi, othi uyokho-hlwa efile ebona izidumbu zaba-ntu zilahlwe ehlathini aphaphama kulona, khona ePhoenix – uMnu Sandile Sambo (36), okwakuha-njwa ngetekisi asebenza ngayo, uNkz Linda Khawula (22), uNkosi Madlala (23) noMthobisi Ntuli (24).
ILANGA lihambele abasindile, abanye babo abasalele phansi ngenxa yokulimala. Bonke basazibuza ukuthi baphunyuka kanjani njengoba bethi umphakathi wakuleya ndawo wawuqonde ukuqeda ngabo, usho uthi ubafuna befile.
UMnu Marese uthe: “Sasiwu-6 emotweni siyothenga izidakamizwa zethu esizidlayo. Sangena ePhoenix umphakathi uvimbile, kodwa wangasinika inkinga. Safi-ka la esithenga khona, kwehla umuntu oyedwa eyothenga, samli-nda emotweni. Kwakukhona no-tshwala sihamba siphuza.
“Uthe ebuya nje emotweni esethengile, kwaqhamuka iFord Ranger yasivimba. Ngemuva, kwa-qhamuka iqulu lomphakathi liphethe izinduku nezibhamu, lasiphoqa ukuphuma emotweni, lasishaya. Kasikwazanga noku-chaza ukuthi kasizona izigebengu.
“Saphuma sonke sabaleka emo-tweni, uNjabulo wasala ngenxa yokuthi lesi gameko senzeka ezumekile. Saphuma sabaleka ngokwehlukana. Ngabaleka ngayo-ngena ehlathini eliseduze, ngahlala khona kwaze kwaba phakathi kwamabili. Ngaphuma ngazama ukuthubeleza ngibaleka ngoba ngangingakalimali kakhulu.
“Ngazithela phezu kwelinye iqulu lomphakathi, langibamba langihlalisa phansi, langisola ngokuthi ngiyisigebengu, langishaya. Ngashaywa ngaze ngalunyiswa ngezinja. Nakuba ngisindile, ngasizwa wukuzenza umuntu ofile, ngangabe ngisakhala, nganganya-kaza.
“Bangibopha izandla nezinyawo bangihudulela ehlathini elisedu-ze, kwase kuwuLwesibili ekuseni, sekuqala ukukhanya bengihudulela ehlathini beyongilahla khona. Ngethuka uma ngiphaphama kuleli hlathi kunezidumbu ezingaphezu kuka-5 eceleni kwami, zinama-nxeba okushaywa nokugencwa emakhanda nasemzimbeni,” kusho uMnu Marese.
Uthi namanje usethuka uma evala amehlo ngoba kuvele kubu-ye le nto ayibona. UMnu Madlala uthi ngesikhathi bephuma emo-tweni bezama ukubaleka, washa-yeka okhalweni waphelelwa ngamandla, wangakwazi ukubaleka.
Uthi wasala endaweni yesiga-meko noMnu Dlamini noMnu Sambo. Emuva kwalokho basha-ywa baze baquleka, wawuzwa umphakathi uthi mabashiswe.
“Waqeda ukusho lokho wasi-bhunyela ngodizili umzimba wonke. Imoto esasihamba ngayo yayisingqongqiswe ngomlilo. Waphazanyiswa wukuqhamuka kwemoto yamaphoyisa, wasimboza ngamapulangwe. Imoto yamapho-yisa yadlula eduze kwethu ngazama ukuphakamisa amapulangwe.
“Nakuba ngiyakhuluma namu-hla, sasizwa yilokho, ngebhadi uNjabulo wayeselimele kakhulu. Asithatha amaphoyisa asiphuthumisa esibhedlela,” kusho yena.
UMnu Ntuli noNkz Khawula bathi basindiswa wukubaleka bayongena esitolo sabokufika kuleli, ababathatha babavalela ngaphakathi. Bathi bahlala izi-nsuku ezimbili bevaleleke ePhoenix, bazama ukufonela imindeni yabo beyitshela okwenzekile.
“Ubaba waze waxhumana nomngani wakhe onomuzi ePhoenix, wasithatha wayosicashisa emzini wakhe. Emuva kwezinsuku ezimbili, bacela elinye ilungu lo-mphakathi lomdabu waseNdiya ukuba lisifake emotweni yalo, lisicashise, lisikhiphe kule ndawo,” kusho uMnu Ntuli.
UMnu Sphiwe Madlala onguyise kaNkosi, uthi wathuka woma ebona ezinkundleni zokuxhumana indodana yakhe nabangani bayo beshaywa, bebizwa ngamasela.
“Isihlukumezile le nto eyenziwe wumphakathi,” kusho yena.
Uthi okubakhalisa kakhulu nokubenza baphatheke kabi, wukuthi kalikho icala elivuliwe ngale nto futhi kalikho nelilodwa iphoyisa elathatha izitatimende ezisulwini.
UNkz Makoti Khawula oyilungu lephalamende ngethikithi le-EFF, okunguyena olusukumele phezulu lolu daba ukuzisa abalimele ba-kwazi ukuvula amacala, uthi ibathintile le nto. Bonke laba abasindile bathi kalikho icala abalivulile emaphoyiseni, nama-phoyisa abasiza kazikho izitatime-nde azithatha kubona.
Previous articleBakhala ngendlala abasemigwaqweni
Next articleUZungu ubona uhulumeni esenzele phansi isizwe